ईवा गार्सिया सेन्ज, एक अप्रत्याशित प्लॉट द्वारा लामो-बाँच्न को गाथा वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, विधाहरू, किताबहरु, नोभेला
पुरानोको गाथा ऐतिहासिक किताका साथ दुई किस्तामा प्रकाशित हुने श्रृंखला हो: पुरानो परिवार (2012) र आदमका छोराहरू (2014)। पहिलो शीर्षकले स्पेनिश उपन्यासकार ईवा गार्सिया सेन्जको एकदमै सफल साहित्यिक शुरुआतको रूपमा चिन्ह लगायो, विशेष आलोचकहरूद्वारा वर्णन गरिएको त्यो विशाल प्रकाशन घटना हो जुन डिजिटल मिडियामा शुरू भयो।
गाथा मुख्य चरित्र, १०,10.300०० वर्ष पुरानो Iago डेल कास्टिल्लोको परिचयबाट शुरू हुन्छ। उनले को-स्टार (एड्रियाना आलमेडा) को साथ जटिल अनुसन्धान शुरू गर्दछ जुन लामो जीवनका अनन्त युवाको आनुवंशिक रहस्यको समाधान गर्न खोज्छ। दोस्रो भागले समयको बिरूद्ध रेसको बीचमा चरित्रको गहन विकास प्रस्तुत गर्दछ जुन तेस्रो किस्तमा सानो अन्तर राख्छ। यो छोटो छ, तपाई मर्नु अघि पढ्नु पर्ने किताब।
2 प्लॉट, विश्लेषण र दीर्घकालीन जीवनको सागाका पात्रहरू: पुरानो परिवार
2.1 अनन्त युवाको उत्परिवर्तन
2.2 इआगो डेल कास्टिलो र उत्तरहरूको खोजी
2.3 जैमे डेल कास्टिलो
2.4 क्यारा डेल कास्टिलो
2.6 L ,r, "कुलपति"
3 विश्लेषण र आदमको छोराको सारांश
4 त्यहाँ लामो जीवनकालको सागा को तेस्रो किस्त हुनेछ?
इवा गार्सिया सेन्जको जन्म १ 1972 XNUMX२ मा इलाटाको भिट्टोरियामा भएको थियो। उनीसँग अप्टिक्स र अप्टोमेट्रीमा डिग्री छ, एलिसान्ट विश्वविद्यालयबाट स्नातक, एक पेशा कि उसले आफैंलाई बढी पूर्ण रूपमा साहित्यमा समर्पित गर्नु अघि अभ्यास गर्यो। को मूल प्रकाशन पुरानो परिवार: लामो समयसम्म बाँचेको गाथा (२०१२) वेब पोर्टल Amazon.com मार्फत उत्पादन गरिएको थियो, प्रकाशकहरूले आफ्नो काममा चासो नराख्नु भएपछि।
त्यस बेलादेखि, गार्सिया सेन्जले आफ्नो पहिलो पुस्तकको राम्रो स्वागतको फाइदा उठाए: आदमका छोराहरू y ताहितीको लागि यात्रा, दुबै २०१ 2014 बाट। २०१ During को दौरान उनको प्रशंसित पहिलो किस्त सेतो शहर त्रिकोण, सेतो शहर को मौनता, संग जारी पानी संस्कार (2017) र समय प्रभुहरु (2018)।
उनी एक लेखक हुन् जुन उनको आफ्नै शैली विकास गर्न सक्षम छ कालो उपन्यासजहाँ उसले व्यावहारिक र काल्पनिक बीचका सीमाहरूको अन्वेषण गर्दछ जहाँ पर्याप्त मनोरन्जनात्मक तरिकामा। थप रूपमा, गार्सिया सेन्जले आफ्नो प्रत्येक विवरणको विस्तृत वर्णन गर्ने क्रममा एक महान अनुसन्धान र तयारी क्षमता प्रदर्शन गर्‍यो, यस कारणले गर्दा उनले आफूलाई पुरातात्विक संसारमा वा पुलिस इतिहासमा एक विश्वसनीय र संक्षिप्त तरीकामा डुबाउन सकेका छन्।
प्लॉट, विश्लेषण र दीर्घकालीन जीवनको सागाका पात्रहरू: पुरानो परिवार
अनन्त युवाको उत्परिवर्तन
यस पुस्तकले एक परिवारको उपस्थितिलाई विचार गर्दछ जुन तीन दशक भन्दा बढि उमेर नभएको अज्ञात आनुवंशिक उत्परिवर्तनको लागि धन्यवाद। यी पौराणिक आंकडा वा अमर प्राणीहरू होइनन्। वास्तविकतामा, यस अवस्थाको उत्पत्ति वंशानुगत हो। जे होस्, किन यो यति विरलै प्रसारण गरियो इतिहासमा लुकाइएको छ।
इआगो डेल कास्टिलो र उत्तरहरूको खोजी
त्यसकारण, इआगो डेल कास्टिलो उत्तरहरू खोज्ने निर्णय गर्दछ, आफ्ना भाइहरू जैमे डेल कास्टिल्लो र क्यारा डेल कास्टिल्लो द्वारा संचालित। १०,10.300०० वर्ष अगाडि क्यान्ट्याब्रियाको तटमा जन्मेका इआगो (वास्तवमा उसको नाम उरको हो) परिपक्व देखिन्छ। ज्ञानले ग्रस्त, कलेज डिग्रीका एक उत्सुक कलेक्टर, र केही समस्या समाधान गर्ने उन्माद हो।
ऊ क्यान्टाब्रिया (म्याक) का पुरातत्व संग्रहालयको प्राविधिक समन्वयकको रूपमा काम गर्दछ। किनसालको युद्धमा आयरल्याण्ड गुन्नरको मृत्यु पछि (आयरल्याण्ड, १ 1602०२), उरको मदिरा सेवनको अवधिमा गुज्र्यो। उनलाई यस व्यसनबाट मुक्त हुन गाह्रो समय थियो। उपन्यासमा भएका आधा भन्दा बढी घटनाहरू उहाँ पहिलो व्यक्तिले वर्तमान कालमा हुने प्लाट लाइनमा वर्णन गरेका छन्।
यद्यपि, समय समयमा प्राचीन कालका दर्शनहरू (प्रागैतिहासिक वा सिथियन काल, उदाहरणका लागि) विगत युगका घटनाहरू सम्बन्धित चरित्रका सम्झनाहरू मार्फत देखाइन्छ। थप रूपमा, इआगोले आफ्ना भाइहरू र दानासँग नायकको भूमिका साझा गर्छन्। अब, उहाँ एक छ जसको अलि बढी तौल छ किनकि पुरानो परिवार भित्र नेताको भूमिकाको कारण।
जैमे डेल कास्टिलो
जैमे डेल कास्टिलो, जसको वास्तविक नाम नागोर्नो हो (युक्रेनमा जन्म, उमेर: २,2.700००), उहाँ म्याकको संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ वृद्ध परिवारमा आफ्नो जेठो दाइको स्थितिसँग कहिल्यै सहज हुनुहुन्न। उनले आफ्नो कम्पनीको सफलता को लागी भाग्य धन्यवाद राख्छ। उनको विवादास्पद र एलिस्टवादी चरित्र छोटो समयको परिवारलाई तुच्छ ठान्ने महिला डेन्डीको उनको दृष्टिकोणको आदर्श पूरक हो।
क्यारा डेल कास्टिलो
अर्कोतर्फ, क्यारा डेल कास्टिल्लो (लिरा) म्याक बहाली प्रयोगशालाको सुपरवाइजर हुन्। यसको लगभग २,2.500०० वर्षको अवधिमा यसले धेरै कालका बच्चाहरू गुमाएको छ, यसैले, जीनको पहिचान गर्दा दीर्घायु हुन्छ जुन आफ्नो अस्तित्वको केन्द्रीय कारण भएको छ ताकि यसले आफ्नो विगतका आघातहरूलाई राहत नदिन। शान्त र आरक्षित व्यवहारको साथ, ऊ उरको बाहेक उसको वरिपरिका व्यक्तिहरूमा धेरै संदिग्ध छिन्।
कथानकको विकासमा, एड्रियाना "दाना" अलमेडा अल्मेराणाको उपस्थिति निर्णायक छ। उनी सान्तान्दरकी प्राध्यापक हुन् जो प्रागैतिहासिकमा विशेषज्ञ हुन्, उनी म्याकको प्रागैतिहासिक विभागको संरक्षण प्रमुखको रूपमा काम गर्छिन्। उनी १ 1980 in० मा जन्मेकी एउटी युवती हुन्, उनको कठोरता र उनको प्रभावशाली पाठ्यक्रमबाट भिन्न जुन युरोपमा सब भन्दा महत्वपूर्ण भण्डारमा काम गर्दछ।
डानाको व्यक्तिगत अभिप्राय आमाको आत्महत्याका कारणहरू स्पष्ट पार्नु हो जुन उहाँ बच्चा हुनुहुन्थ्यो। जे होस् सुरुमा यो इगोको व्यक्तित्वको साथ टकराउँदछ, ती दुबै बीच एक गहिरो आकर्षण हुन्छ कि तिनीहरू दुबै समयको लागि ओभरल्याप गर्न चाहन्छन् ... जब सम्म उनीहरूले प्रेम दिएन र प्रेम सम्बन्ध नदेओन्।
L ,r, "कुलपति"
लूर, "कुलपति" (हेक्टर डेल कास्टिल्लो) कुवेला डेल कास्टिलोका स्थानीय हुन् जहाँ उनी झण्डै २ 28.000,००० वर्ष अघि जन्मिएका थिए। उहाँ "मानवता को डीन" मान्न सकिन्छ। यसको प्राथमिक मिसन सबै लागतहरुमा पुरानो परिवारको एकताको रक्षा गर्नु हो। एक मैत्रीपूर्ण र शान्त व्यवहार संग, उहाँ एक उत्सुक पाठक र माछा मार्ने शौक हो। उनका हजारौं बच्चाहरू मध्ये केवल तीनले अनन्त युवाको लागि जीन विरासतमा लिएको छ, वैज्ञानिक कारण? खैर, अहिलेसम्म कसैले पनि यसको व्याख्या गरेका छैनन्।
विगतका विवरणहरूमा स्पष्ट रूपमा विस्तार इवा गार्सिया सेन्ज द्वारा निर्मित उत्कृष्ट दस्तावेज प्रदर्शन गर्दछ। पारिवारिक झगडाका कारणहरू पनि व्याख्या गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। तिनीहरूले exciting०० पृष्ठ भन्दा बढी पृष्ठमा एक रमाईलो र धेरै तरल ताल राख्छन् पुरानो परिवार: लामो समयसम्म बाँचेको गाथा.
विश्लेषण र आदमको छोराको सारांश
सागाको पहिलो पुस्तक जस्तै, गार्सिया सेन्जले अनियमित सुराग छोड्दैन वा पूरक अक्षरहरू थप्दैन। जानकारी को प्रत्येक टुक्रा प्रासंगिक छ, विवरण मिलिमीटर परिशुद्धता संग समायोजित छन्। थप रूपमा, लेखकले प्रशंसकहरूलाई निराश गरेन जुन धेरै उच्च अपेक्षाबाट उत्पन्न भएको छ पुरानो परिवार। सुरुमा, कथा गहिरो हुन्छ, एड्रियाना र इगो बीचको भव्य अवस्थाको बावजुद, जसले सँगै भविष्यको कल्पना गर्छन्।
पहिलो भागमा, नायकहरूले लोरका बच्चाहरूको डीएनए टेलोमेरेस (टेलोमेरेस) संश्लेषण गर्न जिम्मेवार इन्जाइमहरूमा असामान्य बान्की अलग गरे। आफ्नो बुढेसकालको पक्राउको एक कारणको रूपमा। यद्यपि नागोरोनोमा ईन्कोक्सित टेलोमेरास अवरोधकर्ता अपेक्षे भन्दा पहिले नै सक्रिय भयो। यसले उसको मुटुलाई १०० बर्षको उमेर जस्तो कार्य गर्दछ जब उसको उपस्थिति 30० सम्म जारी रहन्छ।
यस अवस्थामा, निराश नागोर्नो समाधानको खोजीमा दानालाई अपहरण गर्ने रणनीतिका रूपमा अपहरण गर्ने निर्णय गर्दछ। (अत्यावश्यक छ कि यो २१ दिन भन्दा कममा होस्) नतिजाको रूपमा, पुरानो परिवारको भाग फेरि एक ठाउँमा आउँदछ। यसमा पहिलो पुस्तकमा मृत मानिएको चरित्रको आश्चर्यजनक उपस्थिति समावेश छ।
तुलना गरिएको, en आदमका छोराहरू को विवरण flashbacks विगतबाट तिनीहरू यति धनी वा टिकिरहेका छैनन् - वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट - पहिलो किस्तमा जस्तै। तर, निस्सन्देह, यो एक कथाले हासिल गरेको हो जुन सजिलै पाठकलाई हूक गर्दछ। त्यो हो, यसले गुणस्तरको स्तर गुमाउँदैन। अचम्मको मोड र उत्तेजना कोटा पुरानो परिवार: लामो समयसम्म बाँचेको गाथा.
त्यहाँ लामो जीवनकालको सागा को तेस्रो किस्त हुनेछ?
सम्भवत सम्पूर्ण श्रृंखलाका पाठकहरूको लागि प्राय: बारम्बार समाधान नगरिएको प्रश्न कुखुरा र अण्डा दुविधाको समानता हो।: यदि एन्टिग एजिंग जीन प्रसारित गर्न तपाईंलाई लामो समयसम्म बाँच्न आवश्यक छ, पहिलो कसरी उत्पन्न भयो? गार्सिया सेन्जका अधिकांश वफादार अनुयायीहरूलाई आशा छ कि यो रहस्य तेस्रो किस्तमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनेछ।
यस सम्बन्धमा, क्यान्टाब्रियन लेखकले प्रेस डोजियरलाई भने पुस्तकहरूको क्षेत्र: «मैले एक आत्म-निर्णायक उपन्यास लेखेको छुजे होस् "सागा" को शीर्षक भ्रामक हुन्छ, यसको साथ म एउटा परिवार सागालाई सga्केत गर्दै थिए। त्यहाँ लामो समयसम्म बाँच्ने थुप्रै वितरणहरू छन् कि त यसले कति टाढा जान्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ।
यदि म क्वालिटी समय फेला पार्न सक्छ फेरि अर्को उपन्यास को लेखन सामना गर्न - "मलाई पहिलो २ 27 महिना लाग्यो र मैले यो रातमा लेखें, युनिवर्सिटीमा काम गरिसकेपछि र केही कम्तिमा पारिवारिक दायित्वहरूको माग गर्दै - कुनै श doubt्का बिना त्यहाँ लामो समयसम्म बाँचेका कथाहरू हुनेछन्।
अठ्ठाईस हजार वर्षको इतिहासले लामो यात्रा गर्छ र पात्रहरू पहिले नै राम्रोसँग रेखांकित गरिएका छन्तिनीहरू यति बहुपक्षीय र यती ठूला छन् कि तिनीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक युगमा काम गर्दछन्। जे भए पनि, तिनीहरू सँधै आत्म-निर्णायक उपन्यासहरू हुन्थे; एक पाठकको रूपमा, म कथा के समाप्त हुन्छ भनेर जान्नको लागि केही वर्ष पर्खेर सहन सक्दिन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » ईवा गार्सिया सेन्ज द्वारा लामो समयसम्म बाँचेको गाथा
दमासो अलोन्सो। उनको मृत्युको th० औं वार्षिकोत्सवमा son सनेटहरू